OUAGADOUGOU-Xukuumadda dalka Burkina Faso ayaa sheegtay in dabley hubeysani dileen 132 qof kaddib weerar ay kooxdani ku soo qaadeen tuulo ku taalla waqooyiga dalka Burkina Faso.
Weerarkani oo ka dhacay tuulada Solhan eek u dherersan soohdinta dalkaasi uu la wadaago Nayjar.
Kooxda falkan geysatay oo ay xukuumaddu ku tilmaantay ayaa dab qabadsiisay guryihii iyo suuqii halkaasi ku yiillay. Dowladdu ma aanay sheegin cidda ay ahaayeen kooxda falka geysatay.
Dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday baroor-diiq qaran oo saddex maalmood socon doonta.
Tan iyo bilowgii sanadkii tagay waxaa sii xoogeysanayay weerarrada kooxaha hubeysani ay ka geysanayaan gobolka galbeedka Afrika gaar ahaan Burkina Faso, Mali iyo Nayjar.
Weerarrada aya asababay barakaca dad tiradoodu ka badantahay hal milyan oo qof iyada oo dhanka kalena Burkina Faso ay martigelisay ku dhawaad 20 kun oo qaxooti ah oo ka soo cararay dalka Maali oo ay ka jiraan kooxo hubeysan.
Related Topics:BurkinadishayFasohubeysankooxmarqaan wararka maantaoo132qaran news wararkaQofwararka somaliland iyo puntland
Dagaal ka dhex bilaawday dowladda Nigeria iyo shirkadda Twitter – Radio…
Xog: Labada qof ee lagu tuhmayo dilkii Nafisa Cumar oo meydkeeda laga helay…
Wararka Maanta : Dowladda Ingiriiska oo Ciidamo horleh u tababareysa Soomaaliya - Radio...
Wararka Maanta : Soomaaliya & Turkiga oo ka wada hadlay kordhinta tababarka Ciidamada -...
Wararka Maanta : Waa Kuwee Magaalooyinka Ugu Nolosha Wacan Dunida?